Ncha na mmiri, nke Marta D. Riezu dere
Ọkachamara na-achọ mma na ejiji. Ogo ịma mma ahụ nke na-achọ ibuli ụdị ebe ịchụàjà kama ịpụpụ iche, nwere ike ịkpata ihe dị iche. O nwedịrị ike ịbụ na otu ụbọchị ọ gara n'okporo ụzọ gba ọtọ dị ka eze ukwu ahụ na akụkọ ahụ, na-eche na ọ na-apụ ...
Helgoland nke Carlo Rovelli dere
Ihe ịma aka nke sayensị abụghị naanị ịchọpụta ma ọ bụ tụpụta azịza maka ihe niile. Okwu ahụ bụkwa maka inye ụwa ihe ọmụma. Ịkọwapụta dị ka ọ dị mkpa ka ọ na-agbagwoju anya mgbe a na-ebute arụmụka n'ime omimi nke ọzụzụ ọ bụla. Mana dịka onye amamihe ahụ kwuru, anyị bụ mmadụ na ọ nweghị ihe…
The Runaway Kind nke Anthony Brandt
Anyị na-abanye n'ime nnukwu ihe nzuzo nke evolushọn mmadụ, ihe na-akpali akpali nke bụ eziokwu dị iche. Anyị anaghị ekwu ọtụtụ ihe gbasara ọgụgụ isi kama banyere okike. Site na ọgụgụ isi, onye proto-man nwere ike ịghọta ihe ọkụ bụ site na nsonaazụ nke ịbịaru ya nso. Daalụ maka imepụta ihe...
Site n'ime, nke Martin Amis dere
Edemede dị ka ụzọ ndụ mgbe ụfọdụ na-agbawa n'ọrụ nke na-eguzo n'ọnụ ọnụ nke akụkọ, nke na-adịghị ala ala na biographical. Nke ahụ na-ejedebe ịbụ mmega ahụ kachasị mma nke onye edemede nke na-agwakọta mkpali, mkpali, ncheta, ahụmahụ ... Naanị ihe Martín Amis na-enye anyị na ...